Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkanesuuf dura of Bilisummsuu qabna.
Nami ykn Maatiin of isaa fi mana isaa hin bilisomsiin Saba tokko ykn biyya tokko bilisomsuuf yaaduu hin danda’uu. Summii Bilisummaa keenyati guufuu ta’uu of jala maqisuu qabna. Prof. Asafa Jalata Qabsoon Ummata Oromoo kan qancaruu isaati sababi ini gudan tokko Oromummaan utuu siirti Oromoo hunda keessati hungudisin hubanno murasan qabsooti seenuu keenya ta’uu ibsa. Kun gutuman gututi siiridha. Rakkoon nu qunaman hunda yoo gadii bafnee hunda sacaanee ilaalee bu’uurii rakkoo keenya Oromummaa cimmaa leenjii fi barumsan nu keessati hanga barbachisuu waan hin gudaneef. Waarumti Ogganna of jeedhuu iyuu guyya guyyan gara garanti fi kan ol gadii raafamanfi Habashumaa of keessa basan Oromummaa bakka bufachuu dadhabantuu mila laman kara lamaa irra dhabacha jiru.
Namii Oromummaan isaa keessati gudatee kara tokko qoofa irra adeema kara Qabsoon Oromoon qaqaroon itti wareegama. Fayyida, Ango, Jireenya garii lafa irra fi abjun mana waqa dhaluuf hin foolatuu. Nami hundu Qabsoon keenya maa qancaree jeedhe Oganuma qoofa Abara malee of isaa keessa, mana fi maatii isaa hin ilaaluu.
Nami Saboonan Oromummaa isaa cimmaa ta’ee Bilisummaa Oromoo fi Walabumma Oromiyaa barbaduu waan qabsoof fara ta’ee tokko hin hojeetuu fakeenyaf:-
1. Seena Garbummaa Oromoon Habasha jalati wagga 150 dabarsee utuu beekan garbummaa kana buqisuuf qabsoo goodhamee keessati Oromoo qaroon hiriyan isaan wareegama utuu yaadatan dhaabba wagga 40 qabsa’ee diigan facasan Habasha waliin ijaramuuf hin deeman ture;
2. Oromoon waliin utuu tokko ta’uu qabnuu of wal facafnee horma waliin tokkummaa ijarachuun, kayyoo diina fara Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa jala hirirun Oromummaan nu keessa dhibuu isaati
3. Akka Diasporan biyya ala bareengada utuu dhiigi baratoota Oromoo dhagala’aa jiruu Konduminyem 40/40, 60/60 kkf fi lafa Oromoo karemetra 200km fudhachuuf Embassy Ethiopiati galma’an hiriran biyyati galan Tewodros Adanom fi OPDO waliin hin dhichisan turan;
4. Habasha Oromoo dhigga lolasuu utuu arginuu Obooleeyan Amanta jeene Musilima ykn Kirstiyana Habasha waliin jilbenfatan waqeefachuun Oromummaa xiqeesuuf fi of bilisomsuu dhabuu dha.
5. Utuu Oromoon akkasi lafa isaa irra buqa’uu ani Oganna Oromooti ofin jeecha akka OPDO mana jirenya 30 biyya keessa fi biyya alati ijarachuun Oromummaa of keessa dhabuu qoofa utuu hin tanee lamumma Oromoo iyuu of keessa dhabudha.
6. Ogannoon Oromoo wayee siirna gada seera qabesuma isaa dubatuu malee siirna gadaa kabajan yeeroo hojii irra olchu isaan hin arginuu, seera gadaan bula fi bulcha hin jiran, kun isaanumtu wayee Oromummaa hubano ga'aa hin qaban.
Kanaafu nami qabsooti galuu dura of isaa Bilisomsuu qaba, Feedhi Angoo, Qabeenya (Malaqa), ayyanalalatummaa, ofiitummaa, amanta leelisuu, ganda leelisuu, tefoozo kkf hunda irra of bilisomse amla waraaqaa fudhachuu qaba. Amaloon kun fi kan kana fakkatan fara qabsoo bilisummatii. Sababin isaa:-
1. Feedhi Angoo duba waan bayeetuu jira warii TPLF angooti kan cicichanfi itti fayadaman samicha adeemsisuuf, nami yeeroo Ango barbaduu itiinwaan tokko goochuf deema, kan ango fayadaman saba isaan bilisoomsu feedhan 5% hin caalani;
2. Feedhin Qabeenya fi Malaqa Qabsoo kan ajeesuu fi qancarsuu keessa isaa tokko, nami feedhi malaqa fi qabeenya guda qabuu jaaleewan isaa gurgure qabsoo ilee grugure dhabamsisa
3. Ayyanalalatuma ilee qabsoo fi jaalan qabsoo midha, harka naman abida qabachuun, of maatii ofii waliin jirachaa maati nama birro akka faca’uu goochun qabsoo keessati yakka guda dha, waraaqaan of wareege jaaleewan isaa hambisa.
4. Amantan kami iyuu umamuman meesha ittin siyyasa ajeesan dha, gasi abidati dabalan siyyasa itti gubanidha, ykn kan ittin saba tokko ittingarbonfatanidha. Fkn yeeroo si’ana TPLF daabbale isaa bobasee bakka hundati biyya ala fi biyaa kessati church fi Mazigida dhaabee obboleeyan Kirityana ykn Musilima nu Maqa dhigga Yesusin tokko ykn Nu ijoolee Alhati jeechudhan Oromoo of jala jilbeenfachisa jiru, kun haqa jiru, Oromoo yeero gorsitu kun homa miti wayee Afura waqayo isaan waliin gegesun hameenya hin qabu jeedhe nu falma, Church Oromoo dhisee chuch Tigire deema.
5. Ganduma fi Tefoozoo ijarachuu ilee malatoo ofitumaa fi ofiit amanu dhabuti, kun amo fara jaalumma fi madda wal shakkiti.
Nami dhuga barbaduu waan kana hunda hin barbaduu, amla waraaqaa qofa qabachuu dha. Amali Waraaqa qabachuun Saba qabsooftu hunda oliiti iaaluu, kayyoo fi akkeeka itti amantee katee kudhamachuu, of ofi fi maatii of bilisomsuu, jaalummaa, feedhi walloo, of wareegan jaala of hambisuu, of wareegan saba of bilisomsuu, Arada ( Susii) hin tanee irra of walabumsuu . iti fufa.